Hurumende Yononoka Kubhadhara Vashandi Vanobatwa neCovid-19 Vachiita Basa Ravo
Vashandi vezvehutano vanoti vazhinji vavo havasati vawana mari dzavanofanirwa kupiwa kana vabatwa nechirwere cheCovid.
Vashandi ava vanotiwo havasi kufara nekuvatyityidzirwa kwavari kuitwa nehurumende iyo iri kuti vasina kubaiwa nhomba vachanyimwa mari dzeCovid Allowance.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association, Va Enoch Dongo, vati vashandi vezvehutano vakawanda vacho havasati vawana mari dzekubatwa nechirwere cheCovid-19 vari pabasa kunyange hazvo vave nenguva yakareba vanyorera kuti vawane mari idzi.
VaDongo vati nhengo dzavo dzinenge dzichida mari iyi padzinenge dzichirwara kuitira kuti vdzikwanise kutenga zvikwanisiro.
VaDongo vatiwo mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora (75 million) anonzi akasendekwa parutivi kuitira kuti mari iyi ibhadhare vashandi vezvehutano vanobatwa neCovid-19, haikwani sezvo vakabatwa neCovid-19 vadarika zviuru zvina.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Association, VaPrince Butau,avo vakabatwa neCovid-19 gore rapera, vaudza Studio 7 kuti vakazowana mari muna Kurume gore rino kunyange vakange vanyorera mari iyi gore rapera. Asi VaButau vati hurumende inofanirwa kunge ichipa mari kwehupenyu hwese munhu anobatwa neCovid-19 ari pabasa.
Mumwe mukoti asina kuda kudomwa nezita audza Studio7 kuti kunyange hazvo akabatwa nechirwere ichi kutanga kwegore rino, haasati awana mari kunyange hazvo akanyora mapepa anodiwa.
Panyaya yekutyityidzirwa nehurumende kuti vasina kubaiwa nhomba vachanyimwa mari dziri kupiwa vashandi vese vezvehutano dzeCovid-19 allowance, VaDongo vati zvakaipa zvikuru kumanikidza vanhu kubayiwa nhomba.
VaButau vati mari inoita zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS iri kupihwa seCovid-19 allowances ishoma zvakanyanya. Vatiwo hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vezvehutano yotaurirana navo pamusoro pekubaiwa nhomba yeCovid-19.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuHealth Services Board asi gurukota rezvekubudiritswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vakaudza vatori venhau nemusi weChipiri kuti hurumende iri kubhadhara mushandi anenge abatwa neCovid-19 ari pabasa mari inotangira pamazana matanhatu emadhora ekuAmerica kusvika pachiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica.
Pamusoro pezvo mushandi wezvehutano anopihwa zviuru zvitanhatu nemazanamaviri emaRTGS semari yekubatsirikana munguva yeCivid-19.
Vakatiwo Health Services Board yainge yabhadhara vashandi mazana mana nemakumi matatu nevaviri pavashandi vezvehutano zviuru zvina nemazna mana ane makumi mana nevana vakanyorera kuwana mari iyi.
Amai Mutsvangwa vakati mari yakaiswa parutivi nehurumemde haikwani kubhadhara vashandi vese vakabatwa neCovid-19 vakati zvinoda kuti hurumende iwedzere mari iyi.